Uma ungakwazi ukuthola idatha edingekayo kuwebhu, khona ezinye izindlela umuntu angazisebenzisa ukuze athole lezo zindaba ezidingekayo. Isibonelo, umuntu angathola idatha kusuka kuma-AP-based API, akhiphe idatha kusuka kuma-PDF ahlukahlukene noma ngisho nakwebhusayithi ye-scrape screen. Ukukhipha idatha kusuka kuma-PDF kuwumsebenzi onzima njengoba i-PDF ingavame ukuqukethe imininingwane eqondile engayidinga - pool table dining tops. Ngakolunye uhlangothi, ngesikhathi senqubo yokukrini kwesikrini, okuqukethwe okukhishwe kuhlelwe ikhodi noma ngokusetshenziswa kwe-utility. Ukuthola idatha ye-web scrap kungaba umsebenzi onzima, kodwa uma umuntu enombono wokuthi yini okudingeka yenziwe, kuba lula.
Omunye wemigomo eyinhloko yokweqa iwebhu kuzokwazi ukufinyelela idatha efundwa ngomshini. Le datha idalwe ikhompyutha yokucubungula, futhi ezinye zezibonelo zayo zendlela ifaka phakathi i-XML, CSV, i-Excel amafayela, no-Json. Idatha efundekayo ngomshini ingenye yezindlela ezihlukahlukene umuntu angayisebenzisa ukuze athole idatha yewebhu ye-scrape njengendlela elula futhi ayidingi izinga eliphakeme lezinqubo ukuze alisebenzise.